Paul Rabary : “Tsara foanana ny Antenimierandoholona sy ny CFM” | NewsMada
Hevitra hafa koa. Nitondra ny fahitany ny raharaham-pirenena ny mpandinika ny fiarahamonina, Rabary Paul. Nambarany fa tsy ny Antenimierandoholona ihany no tokony foanana.
“Ho an’ny firenena toa an’i Madagasikara, mavesatra be ny Antenimierandoholona. Satria efa misy ny solombavambahoaka voafidim-bahoaka eo anivon’ny Antenimierampirenena. Etsy an-kilany, mbola misy ny loholona voafidin’ny mpifidy lehibe” hoy ny mpandinika fiarahamonina, i Paul Rabary, manoloana ny adihevitra ny amin’ny Antenimierandoholona.
Raha te hahita vokatra amin’ny fampandrosoana isika, tokony hahena ny fampandehan-draharaha ary hampitomboana ny fampiasam-bola. Izay no azo atao raha ny fitantanan-draharaham-panjakana eo amin’ny fiezahana hitondra fampandrosoana.
Tsy azo ahena na itarina ny fe-potoam-piasan’ny loholona, fa mila hajaina ny lalàna velona misy eto Madagasikara. Noho izany, tokony hirosoana ny fifidianana loholona hatao amin’ny 11 desambra.
“Inona ny nataon’ny CFM, hatramin’izay ka hatramin’izao? Inona ny zava-mivaingana nataony? Nampihavana ve izy sa tsia? Inona ny asa fampihavanana nataony?”, hoy kosa izy momba ny Conseil du fampihavanana malagasy (CFM). Nisy fikarohana nataon’ny CFM ve momba izay fampihavanana izay: inona ny manakorontana, inona ny mampihavana? Raha handeha amina fety na mijoro etsy sy eroa, ohatra: aleo zava-mivaingana ?